Bogga ugu weyn BITcoin waxay garaacday kaydka, badeecadaha si ay u noqdaan hantida ugu waxtarka badan 2021
Qiimaha isbedbeddelaya ee Bitcoin ayaa had iyo jeer ahaa usha ay dadka shakiga cryptocurrency u adeegsadaan inay ku garaacaan dadka ka baxsan soo gudbinta, iyaga oo u sheegaya in saadaalin la'aanta sare ee bitcoin ay ka dhigayso fasalka hantida xun. Waxay dadka ka dhaadhiciyaan in hantida kale ee dhaqameedku yihiin kuwa ugu wanaagsan ee soo socda hantida adduunka, ma aha altcoins ama bitcoins ama xitaa shitcoins.
Dhaliiluhu, in kasta oo ay yihiin kuwo sharci ah, waa kuwo been abuur ah oo dheer. Waxaa jira wax badan oo laga heli karo bitcoin iyo cryptocurrency sida hantida hantida marka loo eego hantida dhaqameed sida kaydka iyo curaarta.
Waa ammaan in la yiraahdo, marka la eego tirakoobka aan hayno, in kaydka bitcoin uu ka sarre maray heerka hantida ugu fiican, hadday tahay saamiyada Yurub ama dahabka ama curaarta qaranka, muddo dheer.
2020, tusaale ahaan, bitcoin wuxuu ahaa hanti ka wanaagsan dahabka da'da ah. Saamaynta masiibada ayaa shidaal u ahayd korodhka qiimaha bitcoin iyo qadaadiic kale oo badan.
Sannadka 2021, hantida ugu waxqabadka wanaagsan ayaa ah bitcoin iyo altcoins.
Hadda, tani waxay u ekaan kartaa sidii qof geeskiisa toobay.
Meesha cryptocurrency waxay ku sii kordheysaa heerka astronomical, horumariyayaashu waxay helayaan habab cusub oo ay ku bixiyaan xalalka dhibaatooyinka iyadoo la adeegsanayo tignoolajiyada blockchain. Xalalkani waxay keeneen mashaariicdan si ay u soo bandhigaan tokens iyo altcoins kale.
Calaamadahaas iyo altcoins waxay kor u qaadeen booska maaliyadeed iyadoo dad badani ay galaan booska cryptocurrency. Redot.com waxay siisaa dhammaan raaxada gaarka ah iyo xalalka ganacsatada.
Laga soo bilaabo DeFi ilaa NFTs, baaxadda hal-abuurka cusub ee adduunka cryptocurrency ayaa sameeyay kayd bitcoin, iyo altcoins iyo calaamado kale, kaydka/ hantida ugu wanaagsan ee lagu maalgeliyo 2021.
BITCOIN WAXAY HAYSATAA 49% SANAD ILAA TAARIIKH AH
Saamiyada ugu wax-qabadka wanaagsan adduunka waa cirro marka loo eego bitcoin. Waana hadal xaqiiqo ah.
Aynu eegno saamiyada ugu waxqabadka wanaagsan si aan u aragno sida ay uga soo horjeedaan saamiyada bitcoin.
Saamiyada Yurub ayaa kor u kacay 10.3% sanad ilaa maanta. In kasta oo saamiyada kale ay ahaayeen kuwo cajiib ah, kaydka leh soo celinta ugu wanaagsan, qaar ayaa sameeya ilaa 217.9% (MRNA) sanadka ilaa taariikhda, tirooyinkani ma fiicna marka la barbar dhigo waxa altcoins sameeyo.
Qodobka ugu muhiimsan ee wada hadalkan, waa in aynaan iloobin, waxay eegayaan kaydka waaweyn iyo hantida maaliyadeed, oo la barbar dhigo bitcoin.
Toddobaadkii ugu horreeyay ee Oktoobar, heerka kobaca ee shirkadaha yar yar ee Maraykanka ayaa ahaa 17%, kaliya 3% ka sarreeya waxa bitcoin uu sameeyay Oktoobar oo keliya.
Kuwa aan garanayn waxa ay tahay shirkad-koob-yar ama kaydka-yar-yar, waan sharixi doonaa.
Suuqyada yar-yar waa kaydka shirkadaha dadweynaha kuwaas oo leh hanti suuqeed inta u dhaxaysa $50million ilaa $300million.
Haddaba, markii la falanqeeyay saamiyada shirkadahan, waxay sameeyeen kaliya 17%; taasoo ka dhigaysa bitcoin iyo lacagaha kale ee loo yaqaan 'cryptocurrencies' inay noqdaan hanti wanaagsan oo lagu maalgashado.
WAA MAXAY MAXAY FULQAYYAASHA AY UGU DIGTAAN BITCOIN IYO ALTCOINS?
Kuwa ka soo horjeeda cryptocurrency ayaa si degdeg ah u tilmaamaya isbeddelka qiimaha saamiyada bitcoin iyo altcoins kale. Waxay isbarbardhigaan qiimaha bitcoin inta lagu guda jiro orod ka dhan ah kaydka ugu fiican iyo kuwa soo socda oo ay geesahooda ku dhaleeceeyaan bitcoin iyo cryptocurrency.
Qaar ka mid ah falanqeeyayaasha maaliyadeed ee dhaqameed ayaa ugu yeeray bitcoin dukaan qiimo leh oo aan bixin nooc ka hortag ah oo ka hortagaya qiimaha sarreeya, iyaga oo kula talinaya maalgashadayaasha inay beddelaan lacagahooda kayd ammaan ah.
In kasta oo niyad-xumadooda, haddii mid loo oggolaado in uu ereyga 'qiyaamaha ku dhow' ee ku saabsan bitcoin sidaas oo kale, maaha sabab la'aan.
Tusaale ahaan, qiimaha bitcoin ayaa si aad ah hoos ugu dhacay bishii Sebtembar, isagoo ka ahaa mid sarreeya $55,000 ilaa uu hooseeyo $45,000. Si kastaba ha ahaatee, qiimaha ayaa dib u soo noqday, oo hadda, Oktoobar, qiimuhu wuxuu ku socdaa socodsiin xoog leh, oo ku socda $ 65,000.
Qaar ka mid ah falanqeeyayaasha cryptocurrency ayaa saadaaliyay in qiimaha bitcoin uu kor ugu kici karo ilaa $100,000 ka hor dhamaadka sanadka. Tirooyinkani waxay marag u yihiin xaqiiqda ah in bitcoin weli yahay hantida ugu waxqabadka wanaagsan 2021.
MAXAY YIHIIN XALKA SHAQADAAN?
Xalka ugu fiican ee isbeddelka qiimaha sare ee booska cryptocurrency ma jiro hadda. Qaar ka mid ah maalgashadayaasha iyo ganacsatadu waxay ku baaqeen maamulayaasha goobta cryptocurrency, qaar badan oo iyaga ka mid ah waxay aaminsan yihiin in nidaamiyeyaasha booska, suuqa cryptocurrency uu heli doono nooc ka mid ah xasilloonida, kalsoonida iyo badbaadada.
Waxay yiraahdeen marka ay jiraan maamulayaal, maalgashadayaasha cusubi waxay aad u xiiseyn doonaan inay maalgashadaan bitcoin iyo lacagaha kale ee loo yaqaan 'cryptocurrencies', iyo sidoo kale inay sameeyaan isweydaarsiga aaladaha..
Xalkoodu, in kasta oo ay si fiican ugu muuqdaan warqad, ma fududa sida ay u dhawaaqaan.
Haa, suurtogalnimada ku lug lahaanshiyaha maamulayaasha dawladda ee cryptocurrency iyo bitcoin soo jiidashada maalgashadayaasha badan booska bannaan waxay u badan tahay. Laakin intee in le'eg ayay tahay in nidaamiyayaashu tagaan?
Kuwo badan ayaan weli hubin sida tignoolajiyada blockchain u shaqeyso. Qoto dheer ee suurtogalka iyo hal-abuurka cusub ee suurtogalka ah ee tiknoolajiyada blockchain lama garanayo. Xakameeyayaasha, kuwaas oo eegaya taariikhda dhow, waxay noqon karaan kuwo aad u adag qaadashada fikradaha cusub, kobaca booska cryptocurrency waa la joojin karaa.
Maamulayaasha, haddii ay aqbalaan booska cryptocurrency ee maalgashadayaasha, ganacsatada iyo guud ahaan isticmaaleyaasha cryptocurrency, waa inay u furnaadaan hal-abuurnimo iyo fikrado cusub. Dib u celi waa meel ammaan ah oo ammaan ah ganacsatada.
Xalka kale ee suurtogalka ah waa furfurnaanta ku saabsan baaxadda iyo kala duwanaanta tignoolajiyada blockchain.
Xeer-ilaaliyeyaasha iyo 'dibadda' waxay u baahan yihiin inay fahmaan in tignoolajiyada blockchain iyo cryptocurrency ay ka badan tahay bitcoin iyo qaar ka mid ah altcoins.
ALTCOINS LA YAABKA ISKA ILAALI
Suuqa altcoin waa mid aad u kacsan sida ay yimaadaan. Inkasta oo qaar ka mid ah kaydka ugu waxtarka badan ay diiwaangeliyeen wax ka yar 500% koritaanka, altcoins sida dogecoin ayaa la duubay, laga bilaabo Abriil, koror weyn oo 8000%.
Altcoins kale oo burburiyay saqafka muraayadda ee kobaca hantida waa Solana iyo FTT.
Haddii maal-galiyuhu geliyo $1,000 gudaha Solana bilawga 2021, maal-galiyuhu wuxuu noqon doonaa $97,542.2109 bisha Oktoobar. Koritaanku waa mid weyn! Tani waxay samaysay wax ka wanaagsan kaydka dhaqameed ee leh soo celinta ugu fiican.
Faa'iidada khatarta ah ee altcoins waxay ka dhigaysaa maalgashiga cryptocurrency faa'iido weyn qof kasta. Cryptocurrency waxay garaacdaa hantida kale.
Lacagaha sida bitcoin kaash ayaa sidoo kale sameeyay tirooyinka duurjoogta ah sanadkan.
Haa, booska cryptocurrency weli waa kacsan. Haa, shakigu wali wuu sarreeyaa. Laakiin ma iska indho tiri karno korsashada bitcoin, altcoins iyo calaamadaha kale ee cryptocurrency ee adduunka. Ma dajin karno xalalka lagu horumarinayo Ethereum blockchain iyo tignoolajiyada kale ee xannibaadda. Ma awoodno!
Bitcoin iyo cryptocurrencies ayaa halkan u jooga inay joogaan. Oo way joogi doonaan.
Barnaamijyada Xalinta Khilaafaadka Tafaariiqda: Sidee bay u Qiyaasaysaa Iibintayda
In lacag laga sameeyo Amazon ma aha hawl fudud. Waxay u baahan tahay xirfad, dadaal iyo dulqaad badan…